Galfatoota moorquusaatiif, dhangii ifteessi.
Akaakaawwanni agarsiifaman kun maddaawwan hojbarruu addaa addaa irratti hundaa'u.
Galfatoota moorquusaa jiran tarreessa. Galfata sarara Caasaatti dabaaluudhaaf, galfaticha cuqaasiitii, sarara Caasaa irraa sanduqa duwwaa keessa cuqaasi, kana booda Saagi cuqaasi. Galfatoota haaraa idaa'uuf, qaaqa Galfata Moorquusaa Ibsi fayyadami.
Lakkadda wabii galfata moorquusaa filatameetiif gara sarara Caasaatti ida'a. tarree keessaa galfata filadhuutii, sanduuqa duwwaa keessaa cuqaasi, kana booda qabduu kana cuqaasi.
Lakkadda wabii filatamee, sarara Caasaa irraa haqa.
Galafatoota moorquusaatiif dirqalaawwan fooyinsaa ifteessa.
Akkaataa qubannoo wabiiwwan galmee isaanii keessatti galfatoota moorquusaa foo'a. Yoo wabiiwwan lakkoofsifame ofumaan fayyadamuu barbaadde, dirqala kana filadhu.
Furtuuwwan foo'a isa ati ifteessiteen, galfatoota moorquusaa foo'a. Fakkeenyaaf, barreessaa, yk bara maxxansaatiin foo'a.
1, 2 yk 3
Galfata isa galfatoota moorquusaa itiin foo'u barbaaddu filadhu. Dirqalii kun kan jiraatuu, yoo qabduu raadiyoo Qabiiyyee bakka Bifa bifaan foo'i keessaa yoo filatte qofa.
Galfatoota moorquusaa tartiiba aabaa oleetiin foo'a.
Galfatoota moorquusaa tartiiba aabaa irraa gaditiin foo'a.
Title is: Galfatoowwan (Moorquusa)